पोखरा Archives - Page7of 74 - Dna Nepal
पोखराका घाटगड्डीमा चलखेल–समयमा किन निस्किँदैन टेण्डर ? २७ असार २०७६, शुक्रबार १३:४२
प्रकाश ढकाल पोखरा, असार २७ । नयाँ ऐन आएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । तर पूरानो परिपत्रमा असारदेखि असोजसम्म ४ महिना बर्खे घाटमा निर्माण सामग्री निकाल्न नपाउने ब्यवस्था छ । त्यही परिपत्र हेरेर पोखरा महानगरपालिकाले आफु मातहतका कुनैपनि घाटको बर्खामा..
पोखराको बिजयपुर खोलामा ठेकेदारको बदमासी, ४ दशकमा ४ वटा पुल २४ असार २०७६, मंगलवार ०३:१४
पोखरा, असार २४ । पृथ्वी राजमार्ग बनाउने बेलामै पोखरा छिर्न बिजयपुर खोलामा पक्की पुल बनाईएको थियो । २०३८ सालको जनैपूर्णीमाको दिन पोखरामा ठूलो बर्षा भयो । काहुँखोलादेखिको पानी भरिएर बाढी आएपछि पुल सर्लक्कै बगायो । त्यसपछि बेलिव्रिज पुल बनाईयो ।..
पोखराको बिजयपुरमा डाईभर्सन बगायो, गाडी आवतजावतमा समस्या २३ असार २०७६, सोमबार ०२:४५
पोखरा, असार २३ । पोखरा भित्रिने पृथ्वी राजमार्गको एकमात्रै विकल्प बिजयपुर खोलाको पुल जोखिममा छ । त्यसैले ठूला गाडीका लागि छुट्टै डाईभर्सन गरिएको छ । त्यही डाईभर्सन पनि आईतबार रातीको बाढीले बगाएको छ । खोलामा राखिएको ह्युम पाईप सहितको डाईभर्सन..
पोखरामा सडकमै उत्तानो पर्यो ट्याक्टर, चालक गम्भीर घाईते १५ असार २०७६, आईतवार १३:३१
पोखरा, असार १५ । पोखराको महतगौँडा स्थित सितापाईलाको ओह्रालोमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक घाईते भएका छन् । कालोपत्रे गर्ने मिक्सर लिएर ओरालोमा झर्दै गरेको ग १ त ३३८३ नंबरको ट्याक्टर सडकमै पल्टेको हो । दुर्घटनापछि चालकलाई अस्पताल लगिएको छ ।..
पोखरा महानगरमै कर्मचारीलाई विकट भत्ता !
पोखरा, असार १५ । पोखरा महानगरपालिकाले ११ वटा ग्रामिण वडाहरुलाई अलि कम विकसित वडाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । १६, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २८, ३२ र ३३ नम्बर वडाहरु गाविसबाट महानगरपालिकामा गाभिएका हुन् । विकास निर्माण र दुरिका आधारमा पनि यि वडाहरु अन्य..
पोखरा महानगरको अर्को वडामा पनि चोरी १४ असार २०७६, शनिबार ११:१५
पोखरा, असार १४ । पोखरा महानगरभित्रका वडा कार्यालयमा चोरी हुने वडाको सुचिमा फेरी एउटा वडा थपिएको छ । पोखरा वडा कार्यालयहरु पालैपालो चोरी भइरहेका छन् । शुक्रबार राती पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर २५ को वडा कार्यालयमा चोरी भएको छ । हेम्जामा..
‘पोखराको चाईनापुलबाट मोटरसाईकल सहित मान्छे बगाएर सेतीमा खस्यो !’, खाेजीमा प्रहरी परिचालन
पोखरा, असार १४ । शुक्रबार साँझ परेको अविरल बर्षापछि सडकमा बगेको भलले पोखरामा एउटा मोटरसाईकल सहित मान्छे सेती नदीमा झरेको भन्दै प्रहरीले खोजी थालेको छ । दुईवटा मोटरसाईकल बगेकोमा एकजनालाई तानेर निकालिएको र अर्को मान्छे मोटरसाईकल सहित सेतीमा..
पाेखरा महानगरको ताला खुल्यो, वडास्तरीय बजेट हेरफेर गर्ने सहमति १३ असार २०७६, शुक्रबार ११:००
पोखरा, असार १३ । विनियोजित बजेट हेरफेर गर्ने सहमति पछि पोखरा महानगरमा काँग्रेसका जनप्रतिनिधिले लगाएको ताला खुलेको छ । बजेट वितरणमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै विहिबार लगाईएको ताला शुक्रबार विहान खोलिएको हो । उनीहरुले बुधबार नै बजेट किताव समेत..
पोखरा महागनरमा काँग्रेसको तालाबन्दी १२ असार २०७६, बिहीबार ०५:४२
पोखरा, असार १२ । नेपाली काँग्रेसबाट महानगरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पोखरा महानगरको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएका छन् । बजेटमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरु आन्दोलित छन् । बुधबार नगरसभाको अन्तिम समयमा रातो किताव च्यातेर बाहिरिएका..
पोखरामा बर्षा र हावाहुरी, चार घरको छाना उडायो ११ असार २०७६, बुधबार ०३:११
पोखरा, असार ११ । पोखरामा मंगलबार साँझ आएको वर्षा सँगैको हावाहुरीले चार घरको छाना उडाएको छ । पोखरा महनगरपालीका वडा नम्बर ६ फेवाताल किनारको गाईघाटमा रहेका सुकुम्बासी टोलका चार घरको छाना उडाएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा सदस्य हरी..